Ny Fihiràna Ny Hiram-pirenena Amin'ny Fiteniny Manokana
Rising Voices 31 Desambra 2011
Any amin'ny toerana iray ianao dia mety hahita ireo dikany hafa amin'ny alalan'ny lahatsarin'ny haino aman-jerim-pirenena izay nalefa tao amin'ny YouTube. Raha tsaraina avy amin'ny tsikera tao amin'ireo lahatsary ireo, ireo lahatsary dia fahatsapàna rehareha ho an'ireo mpiteny ireo fiteny ireo mba hanandratana avo ny voninahi-pireneny amin'ny alalan'ny fiteniny manokana.
Okraina: Mampiasa Lahatsary Hisoloana Vava
ASTAU 31 Desambra 2011
Koa satria ny ampahany amin'ny ezak'ireo mpiaro dia nikendry ny hamaha ny olana amin'ny fitohizana ny fitsaboana ORT, ireo Okrainiana mafàna fo miady ho fampihenàna ny fiantraikany ratsy dia namokatra lahatsary izay mampiseho amin'ny antsipirihany ny raharaha manodidina ity olana ity, milaza ny tantaran'ireo olona mijaly noho ny tsy fihetsehan'ireo manam-pahefàna amin'ny fitsaboana sy mitatitra mikasika ireo fahombiazana kely tamin'ity fandraisany anjara ity.
Tiorka: Tsy Mahazo Mibitsika Avy Any Amin'ny Lapam-pitsaràna!
Tiorkia 31 Desambra 2011
Firenena mitarika ny lohany i Tiorkia, eny fa mbola alohan'i Shina sy Iran aza amin'ny fanànana mpanao gazety 107 voasambotra.
Costa Rica : Sehatra Maro Mitsipaka Ny Vinan'ny Governemanta Momba Ny Hetra
Amerika Latina 31 Desambra 2011
Amin'izao fotoana izao, ny zava-dehibe ho an'ny governemanta ao Costa Rica dia ny hanekena ilay vina ara-ketra antsoina hoe "Solidaridad Tributaria"(Hetra faobe)(Solidaridad Tributaria) vina ara-ketra. Na dia izany aza, sehatra maro ao amin'ny fiarahamonina, antoko politika ary mpandraharaha maro no nanao fanambarana ny amin'ny fanoherany mafy io fanovana io.
Tontolo Arabo: Kisarin'ny Tanjaky ny Global Voices Ao Amin'ny Twitter
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 30 Desambra 2011
Hanao jery todika ny sasany amin'ireo fihetsiketsehana lehibe hitanay nandritra ny 2011 izahay. Ity lahatsoratra ity dia hanavaka ny anjara asan'ny fikambanana Global Voices Online amin'ny fanapariaham-baovao ao amin'ny Twitter nandritra ny revolisiona Toniziana sy Ejipsiana